Siphinde sakha isikhundla sokuphatha amasayithi samakhasimende ethu e-WordPress amaningana, futhi enye yezinto esizama ukuyenza ukuhlela imininingwane kahle. Ukwenza lokhu, imvamisa sifuna ukudala ikhasi eliyinhloko futhi sifake imenyu ebala ngokuzenzakalela wonke amakhasi angezansi kwayo. Uhlu lwamakhasi ezingane, noma amakhasi amancane. Ngeshwa, awukho umsebenzi wemvelo noma isici sokwenza lokhu ngaphakathi kwe-WordPress, ngakho-ke sithuthukise ifayela le- I-WordPress List Subpages shortcode ukwengeza kufayela le-theme.php yetimu yamakhasimende.
aclass - Uma ungathanda ukufaka isigaba kuhlu lwakho olungabhalisiwe, mane ulifake lapha.